European Union Simbi: Zvinotarisirwa kuti kubuda kweiyo EU simbi yekudyara indasitiri inodonha ne12,8% gore-ne-gore mu2020.
Post nguva: 08-25-2020
European Iron and Steel Union (Eurofer, inonzi European Iron and Steel Union) muna Nyamavhuvhu 5 yakaburitsa fungidziro yemusika kuti kuburitswa kwemaindasitiri anopedza simbi muEU kuchadonha ne12,8% gore-ne-gore mu2020 uye kukwira na8,9% muna2021. Zvisinei, iyo European Steel Federation ...Verenga zvimwe »
Kutengeswa kwesimbi kweVietnam kwakadonha ne5.4% muhafu yekutanga yegore
Post nguva: 07-16-2020
Mumwedzi mitanhatu yekutanga yegore rino, Vietnam yakaunza matani mamirioni 6.8 ezvigadzirwa zvesimbi, iine huwandu hwekupinza hwekunze hunopfuura mamirioni mana emadhora ekuUS, kwaive kuderera kwe5.4% uye 16.3% zvichienzaniswa nenguva imwecheteyo yekupedzisira. gore. Sekureva kweVietnam Iron uye Simbi Associati ...Verenga zvimwe »
Unyanzvi hwekuvandudza anti-kudzoreredza mweya-wakatonhora roller tafura yekuwedzera goho resimbi iri kubuda
Post nguva: 07-14-2020
Yese pamwe, Xinxing Simbi inosungira kukosha kukuru kune mhando yesimbi uye inotarisa mhando sekutanga kukosha. Pano, kana iyo yekumhanyisa-inomhanyisa mweya-yakatonhorera tafura yeiyo inotenderera dhipatimendi reXinxing Iron uye Simbi Plant muXinjiang iri kushanda, kana inotevera nzira inosangana neinobuda ...Verenga zvimwe »
Mhedzisiro yekudzimisa tembiricha pane microstructure uye zvivakwa zveviri-chikamu simbi
Post nguva: 07-03-2020
Seropa reindasitiri, oiri inotora chinzvimbo chakakosha mugadziriro yesimba. Chinokosha chekuwedzera kugadzirwa kwemafuta munyika yangu kugadzirisa tekinoroji yemafuta. Inowedzerwa chubhu tekinoroji yakakosha nyowani mafuta uye gasi mainjiniya nyowani tekinoroji inogadzirwa uye kugadzirwa pakupera kwe ...Verenga zvimwe »
European Union inoita anti-kurasa marara paTurkey iron, isiri-alloy kana imwe alloy inopisa-yakakungurutswa zvigadzirwa zvesimbi.
Post nguva: 06-11-2020
Musi waMay 14, 2020, European Commission yakaburitsa chiziviso ichiti Eurofer, pachinzvimbo chevagadziri veyakaipisa-yakakungurutswa simbi zvigadzirwa zvesimbi, isiri-alloy kana mamwe maalloys, yakaverengerwa inopfuura 25% yehuwandu hwezvinhu zvakafanana zvigadzirwa. muEU, yakataurwa munaKurume 31, 2020 Iyo yeEuropean ...Verenga zvimwe »
Shandong Iron uye Simbi Indasitiri Shanduko "Enda kune Tsika Uwane Unhu"
Pasi pekumanikidza kwakaderera kwehupfumi hwenyika, shanduko nekusimudzira indasitiri yesimbi hakusi kungodiwa kwekuvandudzwa kwebhizimusi pacharo, asiwo kukosha kwekugadzirisa huwandu hwesimbi yekugadzira kugona uye kubvisa zvigadzirwa kumashure uye maitiro. Sezvo chikuru st ...Verenga zvimwe »
Baosteel Group yemakumi matanhatu emakore esimbi yekugadzira yakaunganidza mazana emamiriyoni mazana mana ematani esimbi
Mutori wenhau akadzidza kubva kuBaosteel Boka muna Chikumi 2 kuti kubva Baosteel Group's Nha. 1 yakavhurika simbi yakatorwa muna 1960, Baosteel Boka rakaburitsa mamirioni mazana mana ematani esimbi mumakore makumi matanhatu. Kugadzirwa kwesimbi yeBaosteel Boka yakapfuura nematanho matatu eakavhurika maficha kufa kukanda ...Verenga zvimwe »
China's Baosteel inoderedza Apr mitengo
Post nguva: 04-16-2020
Sekureva kwechiziviso kubva kuChina cheBaosteel, imwe yeanotungamira masimbi makuru pasi rose, Baosteel yakafunga kudzikisa mitengo yemumba muna Kubvumbi. Izvo zvisati zvaitika, iwo musika waive wakanyatsovimba nemitengo mitsva yaApril naBaosteel, kunyanya nekuti paive nemitemo yakawanda yakamutsidzirwa ...Verenga zvimwe »
Mutengo wenickel weLME unokura $ 700 / ton paMarch 13
Sekureva kwenhau dzemusika, iyo nickel mitengo paLondon Metal Exchange (LME) musi waKurume 13, yakanga yawedzera neUS $ 700 / ton, yakamisa tsika iri kudzikira. Ichinetseka nepasirese kunetsekana padenda re COVID-19, mutengo wenickel svondo rapfuura wakaratidzwa zvisina tariro, akatoputsika kusvika pasi peUS $ ...Verenga zvimwe »